musha Oceania Kane Williamson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNew Zealand celeb cricketer ine zita rezita “Kiwi Kane". Yedu Kane Williamson Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanonyanya kukunda vatambi munyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kane Williamson's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kane Williamson Upenyu hwepakutanga uye Yepamberi Yemhuri:
Kutanga kubva, Kane Stuart Williamson akazvarwa pazuva re8th yaAugust 1990 kuTauranga muNew Zealand. Aive mumwe weimwe yemapatya akazvarwa kuna amai vake, Sandra Williamson uye kuna baba vake, Brett Williamson.
Nyika yeNew Zealand yemadzinza machena ane midzi midiki inozivikanwa akakurira kunzvimbo yekuzvarwa kwake muTauranga maakakurira pamwe chete nehanzvadzi dzake dzakura Kylie, Anna naSophie pamwe nemunun'una mapatya, Logan.
Kukura muTauranga, Kane aive chikamu chemhuri inoda zvemitambo yaive nezvido mubasketball, cricket nevolleyball. Hanzvadzi dzake dzaive dzichishingairira kuita volleyball apo amai vake vaive mumiriri webhasiketi. Mudiki Kane aive padhuze nababa vake vaaiona achitamba cricket uye munguva pfupi akawana kamoyo kadiki kekudzidzira naye. Zvido zvemudiki mumutambo zvakasikwa zvakakura kubva ipapo uye zvakasimbiswa nekuteedzera gamba rake rehudiki mukiriketi, Sachin Tendulkar.
Kane Williamson Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kane aive nedzidzo yake yepuraimari kana yepuraimari ku'Pillans Point Primary School 'muTauranga. Ndichiri pachikoro, Kane aive nhengo inoshingairira yechirongwa chekiriketi icho chaive nezvikwata zvipfumbamwe zvemumba.
Panguva iyo cricket prodigy yaakapedza chikoro, anga atove akashongedzerwa nehunyanzvi hwekutanga hwemutambo uye akaenderera mberi achivagadzirisa panguva yaaizotevera kuita zvechikoro pa'Otumoetai Intermediate 'chikoro uye' Tauranga Boys College 'kwaaive mukuru mukuru .
Kane Williamson Kurarama Kwekutanga Hupenyu:
Taura nezvenhoroondo yebasa raKane rekutanga mukiriketi, zvakatangira mugore ra2004 paakatanga kutamba mumiriri wekiriketi. Makore maviri gare gare, akatanga kutamba kiriketi yekutanga-yezvikwata zvevakuru zvinosanganisira iyo 'Bay of Plenty' uye 'Northern District' timu yepamusoro.
Zviitiko zvake zvakanaka panguva iyoyo zvinosanganisira kuhwina iyo 'State Championship' mu2007-2008 uye kuwedzera nhamba inoshamisa ye40 mazana emakore asati arega kutamba zvikoro zvekoreji.
Kane Williamson Road To Fame Nyaya:
2007 raive gore iro Kane akaita kuti U-19 ibudirire kwechikwata checricket cheNew Zealand, uye akatumidzwa mutungamiriri pamberi pe2008 'World Cup' iyo yaakatungamira timu yake kuma semi fainari asi akakundikana kuenda kuIndia kuMalawi. Makore maviri gare gare (Nyamavhuvhu 2010), Kane akazopedzisira aita basa rake rekunze muSri Lanka panguva yemakwikwi etsiva neIndia.
Kane achiri mazviri, akadzingwa basa kwe “dhadha” bhora panguva yepakutanga uye akatumidzwazve mune imwe imba yekutanga akananga kune “bhora” repiri kuSri Lanka. Nemadhadha maviri akateedzana, ramangwana rakataridza kusarongeka kune mutambi wekiriketi uye kumanikidzwa kuri kwaari kuti azvidzikunure.
Kane Williamson Rise To Fame Nyaya:
Asati gore (2010) apera, Kane akapora kubva mukudzora kwake nekurova zana rake remusikana kurwisa Bangladesh mune ODI nhevedzano. Akaenderera mberi achitora zana rake rekutanga Test makore achisangana neIndia mwedzi wakazotevera mu2011 uye akatanhidzira 131 ichimhanya iyo yakamugadza semutambi wechisere kubva kuNew Zealand kuti angave akaisa zana muzana mukuedzwa kweTest.
Nekukurumidza kusvika ikozvino, Kane inoonekwa seimwe yemakanakisheni akagadzirwa neNew Zealand. Kubudirira kwake kwekupedzisira kwaive kuwana chinzvimbo chechipiri -akanakisisa batsman wepasirese kumashure kwenzvimbo yepasirose yenyika yekutanga, Indian skipper Virat Kohli. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kane Williamson Hukama Hupenyu:
Kane Williamson haasati acharoora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana. Kutanga, Kane haazivikanwe kuti akambodanana chero mukadzi asati asangana nemusikana wake Sarah Raheem.
Kusiyana naKane, Sarah akaberekerwa kuBristol kuUK Iye anoshanda semukoti anokwanisa panguva yekunyora uye akatamira naKane. Sarah anotsigira uye anowanzo tora nguva kubva mumaitiro ake akabatikana kuenda kumitambo yakakosha yaKane kuitira kuti amubatsire kugadzikana. Zvichakadaro, hapana imwe yemabhiri erudo ine mwanakomana (s) kana mwanasikana (s) kunze kwemuchato panguva yekunyora.
Kane Williamson Hupenyu Hwemhuri:
Kane Williamson anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
About Kane Williamson baba:
Brett Williamson ndibaba vaKane. Aive mutambi wekirikiti mukirabhu panguva yehupenyu hwepakutanga hwaKane asati ave mutengesi wekutengesa zvigadzirwa zvemuhofisi. Brett anozivikanwa nekushambidza Kane mukiriketi uye akashanda semurairidzi wake wekutanga. Ivo baba ve5 vachiri kuchengetedza yepedyo baba-mwanakomana hukama naKane uyo anoramba achitarisa kumusoro kwaari kuti ape mazano.
About Kane Williamson amai:
Sandra Williamson ndiamai vaKane. Iye aimbove basketball rep akatendeuka kugara-pamba amai. Sandra anotaura zvine shungu nezvevana vake kunyanya Kane nenzira inoratidza kuti haangori padyo navo chete asi anoshanda semuchengeti wenyaya dzehucheche hwavo.
About Kane Williamson siblings:
Kane ane mukoma mapatya anozivikanwa saLogan pamwe nehanzvadzi nhatu vakuru Kylie, Anna naSophie. Logan naKane vakakurira pamwe chete nezvido zvekugovana muCricket. Nekudaro, Logan haana kuvaka basa mune cricket asi akazova accountant pachinzvimbo. Zvichakadaro, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro peLogan hanzvadzi dzakatamba hockey kana basketball yedunhu ravo uye yezera-boka volleyball yeNew Zealand.
About Kane Williamson hama:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaKane, zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake nasekuru nasekuru naambuya. Ane babamunini vanozivikanwa saJohn pamwe nehama inonzi Dane Cleaver. Padivi rerutivi, Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve mainini vake, babamunini uye vazukuru.
Kane Williamson Life
Chii chinoita kuti Kane Willamson afare? Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Kane's Persona isanganiswa yeLeo Zodiac maitiro.
Anesimba, ane tarisiro, ane hunhu hunhu uye haawanzo kuburitsa pachena nezve hupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kusevha, kuteerera mimhanzi, kufamba, kutamba gitare, kuchengeta mitambo ye basketball, kubata imbwa uye kupedza nguva neshamwari uye nemhuri.
Kane Williamson Hupenyu:
Kane Willamson ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora zviuru zviviri nezvishanu panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaKane kunonyanya kubva mukungogara kuripo kwemubhadharo waanowana semutambi wecricket pamwe nemabhengi ake endero
Nekuda kweizvozvo, Kane haana matambudziko nekushandisa yakakura sezvinoonekwa mukudhura kunotaridzika kweimwe imba yake inozivikanwa paTauranga. Taura nezveunganidzwa wake wemotokari, inozvirumbidza nemhando dzekunze dzinosanganisira Volkswagen Passat iyo yaanovimba nayo nekuda kwekuda kwake kumhanya.
Kane Williamson Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Kane Williamson nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvinhu zvisingaverengeki kana zvishoma-zvinozivikanwa zvisingawanzo kuverengerwa mubio rake.
Kane haana ma tattoos kana inki yemuviri panguva yekunyora uye haasati aonekwa achisvuta, Zvisinei, anopiwa kunwa zvine mwero zvokunwiwa zvakaoma sedoro.
Kunge nyeredzi yebhasikiti LeBron James, Kane anoshandisa akasiyana nemaoko ake. Iye anokambaira uye mabhuru kurudyi-asi asi anonyora kuruboshwe.
Iyo cricketer inobatanidzwa zvikuru mukupa uye yakambopa mari yake yemitambo kune vese vakaurayiwa ne2014 Peshawar chikoro chekuuraya.
Nezve chitendero chaKane, akazvarwa uye akarerwa semuKristu. Nekudaro, iye achiri kutaura chero nyaya pane zvekutenda.
Thanks for reading vedu Kane Williamson Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yakagadziridzwa zuva: Ndira 1, 2021